FIPARITAHANA FITAOVAM-PIADIANA :: Miaramila telo voarohirohy amin'ny fahatrarana bala an-jatony • AoRaha
FIPARITAHANA FITAOVAM-PIADIANA Miaramila telo voarohirohy amin’ny fahatrarana bala an-jatony
Nahatrarana balana « Kalachnikov » miisa roapolo amby zato ny lehilahy efatra nosavain’ny pôlisy teny amin’ny vahilavan’Anosimpatrana, ny alarobia 28 novambra lasa teo. Noentina natao famotorana izy ireo.
Taorian’izay no nisamborana lehilahy telo hafa, teny Mahamasina, izay voalaza fa miaramila. «Ireto mpitandro filaminana ireto no voatondro ho tompon’andraikitra voalohany amin’ny fanaparitahana an’ireo bala mahery vaika ireo. Notanana am-ponja vonjimaika ny iray amin’izy ireo, rehefa avy natolotra ny Fampanoavana ny raharaha. Nahazo fahafahana ny miaramila roa lahy sy ny efa-dahy ambiny», araka ny voalazan’ny tatitra voaray avy amin’ny Pôlisim-pirenena.
Fantatra araka ny nambaran’ny loharanom-baovao eo anivon’ny Tafika Malagasy fa miaramilan’ny RTS etsy Fiadanana ny roa amin’izy telo lahy ireo. Ny iray tamin’izy ireo no nalefa eny amin’ny fonjan’Antanimora.
Niroso tamin’ny fisavana sy fitsirihana an’ireo fiara nivezivezy teny amin’ny faritr’Ilanivato ny mpitandro filaminana, taorian’ny fahafantarana fa misy olona mitondra bala eny an-toerana. Voasambotra ny lehilahy efatra nandeha fiarakaretsaka nahitana an’ireo fitaovam-piadiana ireo.
Fantatra, araka ny fanampim-panazavana avy amin’ny loharanom-baovao akaiky ny famotorana, fa nokasaina haparitaka eto an-drenivohitra sy halefa any amin’ny faritra ireo bala marobe ireo. Enina arivo ariary no hivarotana ny iray amin’izany.
Hosoka sy fanamparam-pahefana Loholona iray voarohirohy amina fivarotana tany
Fanafihana nahafatesana olona